फेरि घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि घट्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौंः मंगलबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार तीन सय रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको हो ।
सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सय रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९५ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज कतिमा कारोबार सुनचाँदी हुँदैछ ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ ।
सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३ सय २० रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १० रुपैयाँले घटेर १३ सय १० रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
ट्याग्स: नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनको मुल्य